Ukubalula kweMveliso ngokuBalaseleyo kwe-280KW LPG yeGesi yeJenereyitha yoMvelisi kunye neFektri | Naipute
Umzekelo weGenset I-280 GFT
Ikaliwe Amandla (kW / kVA) Ngama-280/350
Ikaliwe ngoku (A) 504
Dimension Ngokubanzi (L * W * H) (mm) 3850 * 1900 * 2080
Ubunzima bomzimba (kg) 4815
Umzekelo NY196D32TL (Itekhnoloji ye-AVL)
Chwetheza Emgceni, imivumbo emi-4, ucinezelo lolawulo lombane, iiturbocharged kunye ne-co-cooled burn burn
Ikaliwe Amandla (kW) 320
Uhlobo lwepetroli I-LPG
Ioyile (L) 52
Umzekelo 280KZY, uphawu lweNPT
Ukusebenza kakuhle (%) 93.0
Ukusetyenziswa kwerhasi engamanzi yepetroleum
(1) Ubuchwephesha be-biotechnology obuphantsi bokukhupha ubushushu
Ubuchwephesha obuchanekileyo bokukhupha ubushushu obuphantsi yitekhnoloji entsha yemveliso yeoyile (ibutane, eyona nto iphambili ye-LPG, ineeathom zekhabhon ezine, ke ibizwa ngokuba yi-4 solvent). Xa kuthelekiswa neteknoloji yokususa isisombululo esine-6, inezibonelelo ezibonakalayo zoqoqosho nezentlalo. Uncedo lwayo olubalaseleyo "kukungena kweqondo lobushushu egumbini, ukuphanziswa kobushushu obuphantsi", enokukhupha ioyile ngaphandle kokutshabalalisa izinto ezisebenzayo kunye neprotein yezityalo kwioyile, idale iimeko zokukhutshwa kweoyile exabisekileyo kunye nophuhliso kunye nokusetyenziswa kweprotein yezityalo. Okwesibini, ukusebenzisa umphunga kuncinci, kwaye ukusetyenziswa kwamalahle kwinkqubo yokuvelisa ioyile kuncitshisiwe ngaphezulu kwe-80%, ukwenzela ukunciphisa iindleko kunye nokukhupha "inkunkuma ezintathu". Kwangaxeshanye, xa kuthelekiswa nokutsalwa ngokugqwesa, inezibonelelo zexabiso eliphantsi kunye nomgangatho omkhulu.
(2) Ukubilisa i-Kiln
Uninzi lwee-kilns zeshishini kunye neefutha zokufudumeza zisebenzisa i-petroleum gas enamanzi njengamafutha, njengokudubula iithayile ze-porcelain nge-petroleum gas egalelwe amanzi, ukubhaka kunye nokuqengqeleka kwamacwecwe amancinci ngerhasi yepetroleum, enganciphisi kuphela ungcoliseko lomoya, kodwa ikwuphucula kakhulu umgangatho wokudubula weemveliso.
(3) Amafutha ezimoto
Irhasi yepetroleum engamanzi (LPG) isetyenziselwa ukubuyisela ipetroli njengepetroli yesithuthi. Utshintsho lolu hlobo lwamafutha luwucoca kakhulu umgangatho womoya wedolophu, kwaye ikwalolunye ulwalathiso lophuhliso lokusetyenziswa kweLPG.
(4) Ubomi bokuhlala
Zimbini iindlela eziphambili zobomi kubahlali: I-LPG kwiibhotile kunye ne-LPG kwiibhotile
a. Ngokuhamba: ukuhanjiswa kwemibhobho kwenziwa ikakhulu kwizixeko ezikhulu neziphakathi. Ingumxube wegesi ye-petroleum kunye nomoya, i-petroleum gas kunye negesi, okanye i-petroleum gas kunye nomoya okhutshwe zizityalo zezichumisi, njl. Ngeenkampani zegesi zedolophu, zihanjiswa ngqo kumakhaya abahlali ukuba zisetyenziswe ngolawulo. Kule mihla, izixeko ezininzi ziyifumene le ndlela yokubonelela.
b. Ukuzalisa unikezelo: unikezelo lwebhotile kukusasaza i-LPG ukusuka kwindawo yokugcina kunye nokusasaza ukuya kwikhaya ngalinye ngesilinda yentsimbi etywiniweyo, nesetyenziswa njengomthombo wonikezelo lwegesi kwizitovu zekhaya.
Egqithileyo Ukucaciswa kweMveliso ye-150KW LPG yeGesi yeJenereyitha